eParewa || Peace and Prosperity » चिनले दियो भारत, पाकिस्तान बिबाद बारे अभिब्यक्ती, के चिनले भने जस्तै होला?
चिनले दियो भारत, पाकिस्तान बिबाद बारे अभिब्यक्ती, के चिनले भने जस्तै होला?
२०७५ फाल्गुण ९ गते बिहिबार ०२:३४
काठमाडौं । कश्मीरको पुलवामा भएको आक्रमण पछि चीनले भारत र पाकिस्तान दुबैं देशलाई शान्त हुन आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो । चीनले सकेसम्म चाँडै शान्तिको साथ वार्ता गरेर...
काठमाडौं । कश्मीरको पुलवामा भएको आक्रमण पछि चीनले भारत र पाकिस्तान दुबैं देशलाई शान्त हुन आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो । चीनले सकेसम्म चाँडै शान्तिको साथ वार्ता गरेर छिटो आफ्नो समस्या समाधान गर्नुहोस् भनेको छ । गएको बिहिबार कश्मीरको पुलवामा भएको आक्रमणमा ४६ जना भारतीय सैनिक मारिएको थिए भने त्यो भन्दा पछि पनि लगातार आक्रमण हुँदा मर्ने सैनिकहरुमो संख्या ५० नाघेको छ ।
यस आक्रमणले दुई देशबीचको तनाव बढेको छ । यत्तिसम्म कि दुबै देशले आफ्ना राजदुतलाई आफ्नो देश फिर्ता बोलाएका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेंग शुआंगले दुई देशहरू बीच बढ्दो तनाबबारे सोधिएको प्रश्नमा भने, “पाकिस्तान र भारत दक्षिण एसियाका लागी दुवै महत्त्वपूर्ण देशहरू ुहन् । दुईको आवश्यक्ता अपरिहार्य छ । दुई देशका बीच शान्ति, स्थिरता र स्थिर द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन आवश्यक छ ।”
दक्षिण एशियामा स्थिरता छ, जुन सबै पक्षले कायम गराउँनुपर्ने उनले बताए । उनले अगाडी थप्दैं भने, “चीनले पाकिस्तान र भारतको समस्याहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरुन भन्ने अपेक्षा गर्दछ ।” शुआंगलाई पत्रकारहरुले हालैं साउदी अरबले पाकिस्तानमा २० खर्ब निवेश गर्ने जनाएको बारेमा पनि सोधेका थिए । यसको प्रतिउत्तरमा उनले आफुलाई खुःशी लागेको बताए ।
पाकिस्तानले इमरान खान सरकार सबैंसँग सम्बन्ध विस्तारमा लागेको भन्दैं तारिफ गरेका छन् । पाकिस्तानले चीनले अहिले जारी गरेको कुरा सुरु देखि नैं बोल्दैं आएको छ तर भारत आफैंले वार्ताको लागी इन्कार गर्दै आएको छ । यो बिचमा चीनको यो बयानले भारतलाई थप असर गर्ने देखिएको छ । एजेन्सी
प्रकाशित मिति २०७५ फाल्गुण ९ गते बिहिबार ०२:३४